Celebrate Five Years of Red Giant Films with 25% Off Magic Bullet Suite – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » မှော် Bullet Suite ဟာ Off 25% နှင့်အတူအနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်ငါးနှစ်အခမ်းအနားကျင်းပ
မှော် Bullet Suite ဟာ Off 25% နှင့်အတူအနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်ငါးနှစ်အခမ်းအနားကျင်းပ
အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်အကြီးအကျယ်မွေးနေ့ရောင်းချလှဲ။ , မှော် Bullet Suite အပေါင်းတို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို Magic Bullet ထုတ်ကုန်ချွတ် 25% ။ ရှေ Worley နှင့်အတူတစ်ဦးကအသစ်စက်စက်နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများကိုဗီဒီယို။ အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 19th အပေါ်လာမယ့် giveaway ဆုနှင့်အများကြီးပို။
လက်ပံ, OR - ဇူလိုင်လ 18, 2016 - ဤသည်မှာအင်္ဂါနေ့, အနီရောင်ဧရာကို Magic Bullet Suite နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို Magic Bullet plug-ins များကိုချွတ် 25% ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးကတည်းကငါးနှစ်ကြာခဲ့ အနီရောင်ဧရာ ရုပ်ရှင်, ကြံစည်မှုစက်ပစ္စည်း, ဖြန့်ချိလျက်, VFX, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ခဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အင်အားကြီးဆင်နွှဲဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကြံစည်မှု Device ကိုအနီရောင်ဧရာရဲ့ကျယ်ပြန် filmography သာစတင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2011 ၏နွေရာသီကတည်းကနီဧရာရုပ်ရှင်, 10 ခုနစ်ခုထက်ပိုရုပ်ရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့စမ်းသပ်မှုပဉ္စလက်ပြုပုံကိုပြသနိုင်ဖို့နှင့်မြောက်မြားစွာနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများဗီဒီယိုများ။
အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်၏ငါးနှစ်အခမ်းအနားကျင်းပ & Magic Bullet Suite Tools များချွတ် 25% ရ!
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 19, 2016 တွင်, အနီရောင်ဧရာ၏ငါးနှစ်ကျင်းပပါလိမ့်မည် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး မှော် Bullet Suite နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို Magic Bullet ထုတ်ကုန်ရှေ Worley နှင့်အတူတစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများဗီဒီယို, အခမဲ့ဆု Giveaway နှင့်ပိုပြီးချွတ် 25% ပေးခြင်းအားဖြင့်။ အဆိုပါလျှော့စျေးရရန်, ရိုးရှင်းစွာသွားရောက်ကြည့်ရှုwww.redgiant.com နှင့် (သင်ကလက်လွတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်!) အတွက်ကူပွန်ကုဒ်ကိုသုံးပါ။
ပါတီပူးပေါင်းဖို့နှင့် 25% ဟာ Off ၏လက်ဆောင်ပေးမယ်လက်ခံ!
အနီရောင်ဧရာရဲ့မှော် Bullet Suite အပေါင်းတို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို Magic Bullet ထုတ်ကုန်နီဧရာရုပ်ရှင် '' ကြီးတွေနှစ်ပတ်လည်ဆင်နွှဲဖို့သာအင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 25th အပေါ် 24 နာရီကိုချွတ် 19% များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါရောင်းချမှုအပြည့်အဝလိုင်စင်, အဆင့်မြှင့်နှင့်လည်းပါဝင်သည် ပညာရေးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင် * (ပြီးသား 50% ချွတ်) ဝယ်ယူမှုအတွက်လုပ် redgiant.com စတိုးဆိုင်။ အဆိုပါရောင်းချမှု 19 မှာဇူလိုင်လ 8th အပေါ်စတင်ပါလိမ့်မည်: 00 AM PDT နှင့် 20 မှာဇူလိုင်လ 8th မှတဆင့် run ပါလိမ့်မယ်: 00 AM PDT ။ ပါတီပူးပေါင်းဖို့ရန်, အနီရောင်ဧရာအွန်လိုင်းစတိုးသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မှော်ခံစားရသည်။
*သငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဒြေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အနီရောင်ဧရာထုတ်ကုန်ဝယ်ယူလိုပါကကျေးဇူးပြုပြီး တစ်ဦးပညာသင်နှစ်ဝယ်အဖြစ် Pre-အရည်အချင်းပြည့်မီ ရောင်းရောင်းစျေးနှုန်းကိုလက်ခံရရှိရန်မီ။
မှော် Bullet Suite: $ 599 အမေရိကန်ဒေါ်လာ (များသောအားဖြင့် $ 799 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အတွက်ရောင်းချမှုတွင်
မှော် Bullet ကိုကြည့်: $ 299 အမေရိကန်ဒေါ်လာ (များသောအားဖြင့် $ 399 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အတွက်ရောင်းချမှုတွင်
မှော် Bullet Colorista III ကို: $ 149 အမေရိကန်ဒေါ်လာ (များသောအားဖြင့် $ 199 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အတွက်ရောင်းချမှုတွင်
၏ပြကွက်များနောက်ကွယ်မှာ Go ကြံစည်မှုစက်ပစ္စည်း အထူးနယူးဗီဒီယိုနှင့်အတူ
အထူးပါတီမျက်နှာသာအဖြစ်, Webby Award ဆု-အနိုင်ရညွှန်ကြားရေးမှူးရှေ Worley, အစဉ်အဆက်အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင် '' ပထမဦးဆုံးအတိုရုပ်ရှင်ပြန်လည်လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ် ကြံစည်မှုစက်ပစ္စည်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဗီဒီယိုထဲရှိနောက်ကွယ်မှကြည့်ရှုကြလော့။ သရုပ်ဆောင်များနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းများထံမှဝေဖန်သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူအပြီးအစီးဗီဒီယိုလည်းအရောင်အဆင့်နှင့်ပိုပြီးအသစ်အတွေးအခေါ်များစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ဝင်းရန်ခွင့်များအတွက် Twitter ပေါ်တွင်အနီရောင်ဧရာ join
မှာ Twitter ပေါ်တွင်အနီရောင်ဧရာ Follow @redgiantnews အခြို့သောစကားပြောဆိုမှုနှင့်အနီရောင်ဧရာထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားဆုအနိုင်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်။
အနီရောင် Pledge မျှဝယ်ယူမှုကူညီပြီးအတူဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှအနီရောင်ဧရာကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာအနီရောင် Pledge အာမခံချက်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ www.redgiant.com/redpledge/.
တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Kit တောင်းဆိုခြင်း
မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များနီဧရာထံမှမည်သည့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အစုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကိရိယာအစုံတောင်းဆိုရန်မှာ Anya နယ်လ်ဆင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, အယ်ဒီတာများ, VFX အနုပညာရှင်နှင့်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်နာများများအတွက်ထူးခြားသော tools တွေကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းသူကိုပါရမီအနုပညာရှင်နှင့်နည်းပညာသမား၏ဖွင့်လုပ်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုအလုပ်နှင့်ဘဝအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ် - ကြှနျုပျတို့သညျ "နှစ်ဆအောက်ဆုံးလိုင်းက" မခေါ် - ဤအတွေးအခေါ်ကုမ္ပဏီကြီးရလဒ်များကိုသီးကိုသီးသောရိုးရှင်းသော tools များတည်ဆောက်ခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်ရှုပ်ထွေးလျစ်လျူရှုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, (ကို Magic Bullet နှင့် Trapcode လိုမျိုး) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်စံဖြစ်လာနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လွှင့်ကြသည်။ 200,000 အသုံးပြုသူများကိုကျော်နှင့်အတူပြုလုပ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုမြင်နေခြင်းမရှိဘဲတီဗီ၏ 20 မိနစ်စောင့်ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ပါပဲ။ အနုပညာရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သောကြောင့်အတွေ့အကြုံများကနေကျနော်တို့အနုပညာရှင်တွေများအတွက် tools များရှိသောလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာဖို့မသာပုံစံမျိုးရယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင် Watch 200 အခမဲ့လဲ tutorial ကျော်ထံမှလေ့လာသင်ယူ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုလာရောက်လည်ပတ်နေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုစမ်းပါ။
အနီရောင်ဧရာ Thrones VFX Pt ၏ဂိမ်းဦးလွတ်မြောက်။ 2: အဆိုပါမှာတော့ဖုတ်ကောင်မြင်း - သြဂုတ်လ 22, 2019
Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံဆော့ဖ်ဘောလုံးရွှေအမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်တိုက်ရိုက်လွှ - သြဂုတ်လ 22, 2019
ကို C & ငါ Studios ကလူမှုမီဒီယာ Deliverable များအတွက် 16 စတူဒီယိုရဲ့ဖြတ်စာမျက်နှာဖြေရှင်း DaVinci အပေါ်မှီခို - သြဂုတ်လ 21, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မှော် Bullet Suite အနီရောင်ဧရာ က Ultra HD ဖိုရမ် VFX ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-07-18
ယခင်: FuseFX AMC ရဲ့ "ဓမ္မဒေသနာ" တစ်ခု Inspiration Touch ကိုလျှောက်
နောက်တစ်ခု: ပညာရေးဆိုင်ရာ broadcast, Montgomery ကောလိပ်ရုပ်မြင်သံကြား (MCTV), Myers '' ProTrack နှင့်အတူ Multi-Channel ကိုစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Readies